जापान फुकुसिमा परमाणु भट्टी विस्फोट, एक कर्मचारीको मृत्यु ! | जनदिशा
जापान फुकुसिमा परमाणु भट्टी विस्फोट, एक कर्मचारीको मृत्यु !
एजन्सी, २१ भदौ। जापानले फुकुसिमा परमाणु उर्जा संयन्त्रमा विकिरणको चपेटामा परी एक कर्मचारीको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको छ ।
५० वर्षीय एक कर्मचारीको फोक्सोको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको हो । उनको क्यान्सर सन् २०१६ मा पत्ता लागेको थियो । जापान सरकारले यसअघि परमाणु बिकिरणका कारण चार कर्मचारी घाइते भएको बताएको थियो भने पहिलोपटक कसैको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो ।
सन् २०११ को मार्चमा ९ म्याग्निच्युडको भूकम्पका र सुनामीका कारण फुकुसिमा परमाणु भट्टी विष्फोट भर्इ संयन्त्रमै क्षति पुगेको थियो । जापानको उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रमा रहेको संयन्त्रको ‘कुलिङ सिस्टम’ नष्ट भएको थियो भने रेडियोएक्टिभ पदार्थ पनि लिक भएको थियो । त्यसपछि आसपासका धेरै वस्तीहरु खालि गराइएको थियो ।
जुन कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो उनी सन् १९८० देखि परमाणु उर्जा स्टेसनमा काम गरिरहेका थिए र जब यो दुर्घटना भएको थियो उनी फुकुसिमाको एक नम्बर प्लान्टमा बिकिरण मापक इन्चार्ज थिए ।
Previous Previous post: गल्तीलाई स्वीकार गर्दै प्रश्नपत्र आउट गर्ने प्राध्यापक होमनाथ भट्टराईले दिए राजीनामा
Next Next post: पहिरोले कुलो भत्काएपछि डोल्पाको सदरमुकाम दुनै अन्धकार